Crane abaza kuzisebenzisa
I-Crane Hydraulic Components
Ikhrayitheriya Hydraulic Valve
I-Valve yokuLungelelanisa i-Crane
Crane fracturing Tshixa
Ivelu yokuSebenza yeCranny
Crane Slewing Ulawulo Valve
Ezinye izivalo zamanzi
I-Crane Hydraulic Motor
I-Crane Hydraulic Impompo yeoyile
I-Crane Gear Impompo yeoyile
Ipompo yeCrick Plunger
Ipompo ye-Crane Steering Pump
Icandelo leChane Chassis
Izixhobo zenjini yecrane
Isilinda seCran Horizon
Isilinda seLuff Cruff
Crane No.5 Outrigger Isilinda
I-Crane Enye iSilinda
Isilinda seCane Crane Aidoiljar
Isilinda seCran Telescopic
Isilinda esime nkqo
Isibane se Crane
Crane Alarm Ukukhanya
UkuKhanya okuKhanya emva kweNkungu
UkuKhanya okuKhanya ngokuKhanya kweKhonkco
Ukukhanya kweCane yokuLumkisa
Isibane sentloko esidityanisiweyo esidibeneyo
Isibane senkungu yeCranes
Crane Igama-ipleyiti ukukhanya
UkuKhanya kweCrane yokupaka
Isiphelo seLampu yeMark
Icebo lokucoca idizili
Icebo lokucoca ulwelo ngesanti kubunzulu baphantsi
Ezinye izinto zeefilitha
Impompo inkosi Clutch
Impompo sub Clutch
Inkqubo yeCranque Torque
Ubude kunye ne-angle sensor yunithi
isivamvo uxinzelelo oyile
Inkqubo yokulawulwa kwe Crane
Ingalo yokuqhuba eqhuba
Iindawo zecrane yolwakhiwo
I-crane pulley kunye nesilayida
Inkqubo yombane yecrane
I-Crane Cab kunye nezixhobo
Isibiyeli esingasemva kwesipili
Ibhokisi yemiyalezo kunye nezixhobo
Intambo yentsimbi kunye nokukhala
I-XCMG QY20B crane ijika ngokukhawuleza kwaye icothe
Icala elibi: I-Xugong QY20B crane ijikeleza ngokukhawuleza kwaye ngokuthe chu. Inkcazo yesiphoso: ngena kuloliwe kwaye ujikeleze ngokukhawuleza ngelixa ucotha. Qaphela ukuba uxinzelelo kumacala omabini lahlukile ngexesha lokusebenza kwentsimi. Unobangela wohlalutyo lokungaphumeleli: 1: Indawo ebekiweyo yendawo ejikelezayo ...
I-XCT25L5 ingalo ezintathu-ezine-ezintlanu ayinakwandiswa
Ukungasebenzi kakuhle: I-XCT25L5 345 ingalo edibeneyo ayinakolula. Inkcazo yesiphoso: I-XCT25L5 ayinasenzo xa yolula iingalo ezimbini kwaye yandula ezintathu okanye ezine okanye ezintlanu iingalo, kwaye iingalo zombini zolula ngokwesiqhelo. Unobangela wohlalutyo lokusilela: ukusilela kombane. Ingxaki ...
I-XCMG QY25K5-QY50K (kubandakanya i-QY50B) ingalo yesibini ye-crane kunye neengalo ezintathu ezine eziguqukayo.
Ukungasebenzi kakuhle: I-XCMG QY25K5-QY50K (kubandakanya i-QY50B) ingalo yesibini ye-crane kunye neengalo ezintathu ezine azitshintshi kwicala. Inkcazo yesiphoso: emotweni iingalo ezimbini zishwabana ngesiqhelo, iingalo ezintathu ezinhlanu azinakucima iteleskopu. Uhlalutyo lonobangela wesiphoso: 1 ...